Microsoft Defender ATP no vahaolana antivirus ho an'ny orinasa Android | Androidsis
Ity dia Microsoft Defender ATP ho an'ny Android
Nanambara i Microsoft ora vitsy lasa izay ny fahatongavan'ilay Microsoft Defender ATP teo aloha ary ny zavatra noresahinay raha fehezina kelikely izay. 'Antivirus' izay te-ho tena izy ary tsy manomboka mampiditra endri-javatra izay tsy misy ifandraisany amin'ny rafitra voaaro tokoa.
Fahatongavana vaovao izay manana tanjona ny hahafantatra ny fanamby ampiasain'ny finday avo lenta ao anatin'ny matihanina tontolo iainana. Tsy eto izay te-sarobidy inona no ho Windows Defender, fa nandalo ny finday amin'ny anarana Microsoft mpiaro ny ATP ho an'ny Android. Ataovy.
1 Fahaiza-manao lehibe an'ny Microsoft Defender ATP
2 Fiarovana amin'ny tranonkala
3 Rindranasa karama misy fomba fijery mivelatra
Fahaiza-manao lehibe an'ny Microsoft Defender ATP
Marina fa mihabetsaka ny olona mampiasa ny finday avo lenta hiasa, koa ny fampahalalana mandalo azy ireo, ankoatry ny "sensitive" dia zava-dehibe indrindra hiaro azy amin'ny fijeriny hafa. Ny tanjon'ny Microsoft Defender ATP dia ny hiaro izany data izany.
Ny iray teo aloha fa manana ampahibemaso dia miandraikitra ny fiarovana antsika hanohitra phishing sy ireo unsecured fifandraisana izay tonga amin'ny alàlan'ny fampiharana, tranokala ary rindranasa misy kaody ratsy. Tafiditra ao ihany koa ny fahafaha-mametra ny fidirana amin'ny angon-drakitra orinasa avy amin'ny fitaovana izay "marefo" loatra ka hamela orinasa hiantoka mpampiasa sy angona mipetraka amin'ny fitaovan'ny Android.
El Phishing na halatra maha izy azy avy amin'ny serivisy rehetra na kaonty izay ananantsika dizitaly, dia tena malaza miaraka amin'ireo tranonkala, fampiharana ary maro hafa izay mahazo ity karazana fanafihana ity. Ity dia fintino toy izao:
anti phishing- Voasakana ny fidirana amin'ireo tranonkala tsy azo antoka avy amin'ny hafatra an-tsoratra SMS, WhatsApp, mailaka na fampiharana. Raha ny fitaovana miandraikitra an'io, Microsoft Defender SmartScreen, dia mahita tranokala misy fanararaotana, manakana azy ary mandefa fampandrenesana ho an'ny mpampiasa ary koa fanairana amin'ny Microsoft Defender Security Center
Fanakanana ny fifandraisana tsy azo antoka: Microsoft Defender SmartScreen koa dia tompon'andraikitra amin'ny fanakanana ireo fifandraisana amin'ny tambajotra tsy azo antoka izay ampifandraisin'ny apps raha tsy fantatry ny mpampiasa. Mitovy amin'ny phishing miaraka amin'ny fampandrenesana sy izany fampandrenesana ilaina izany
Toro-marika manokanaNy ekipa fiarovana dia afaka mamorona ireto saina ireto amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo fifehezana bebe kokoa ny URL sy ny domains izay ampifandraisin'ny mpampiasa amin'ny findainy Android.
Rindranasa karama misy fomba fijery mivelatra
Mila maneho hevitra izahay fa miatrika fampiharana voatokana ho an'ny endrika orinasa ary izany dia vahaolana iray hafa an'ny Microsoft amin'ity lafiny ity. Mampiasà fiarovana rahona nohamafisin'ny fianarana milina sy safidy hafa hiarovana ireo angona voalaza avy amin'ireo mpampiasa.
Azontsika atao ihany koa ny mandray ny Microsoft Defender ATP hanakanana ny fidirana amin'ny angon-drakitra mora tohina izay matetika misy lanja lehibe amin'ny orinasa. Tsy isika handeha Mandehana any amin'izao antsipirihany vahaolana orinasa iray izay milaza amintsika fa efa lasa Microsoft amin'ny iray amin'ireo mpanohana lehibe indrindra an'ity rafitra fiasa ity ho an'ny finday. Saika afaka milaza isika fa toy ny hoe nitazona izany ho azy izy.
Ary tsy hamitaka ny tenantsika ihany koa isika fa ilaina ilaina izany noho ny kalitao avo lenta izay ankamamin'ny Microsoft amin'ny sehatra matihanina ary hanome anao izany io orinasa io dia tena ilaina amin'ny rafitra toa ny Android; Raha ny marina dia efa afaka mahita ny sasany amin'ireo fiasa tsara indrindra hampifanarahana ny finday Samsung amin'ny Windows 10 isika ary afaka hiantso amin'ny solosaina finday mihitsy aza.
Raha ny marina amin'ny manana izany fiarovana tontonana foibe dia afaka mahazo fa tsy miatrika vahaolana mora vidy izahay, na dia te hanandrana azy aza ianao izao dia manana ny topi-maso misy azonao alalana ny endrik'ity.
Un antivirus feno izay entin'i Microsoft ary izany dia mifandraika amin'ny vahaolana orinasa hiarovana ity angon-drakitra ataon'ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa ity. Dingana iray hafa nalain'i Microsoft tamin'io fananganana an-jaza io izay manao Android amin'ny fomba manan-tsaina hitondrana azy amin'ny tanjona hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ity dia Microsoft Defender ATP ho an'ny Android
Manampy fiasa fanoratana vaovao manampy ny G Suite